"ကွန်ယက်အဖွဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ" အတွက်နာရီ၏လိုအပ်နေသောူပည်သူ - Cisco
အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဝေးမှေးလုပျငနျး, လျော်ကြေး, နှင့် ပတ်သက်. ပြုလုပ်ထားပြီးအတိုက်အခံအဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျက်သရေ၏စက်မှုလုပ်ငန်းပြီးနောက်အရှိဆုံးအမြိုးမြိုးအကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ခြင်း။ အဆိုပါအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တည်းခိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိုးမြှင့်များအတွက်အခြေအနေလိုအပ်ကြောင်း "ကွန်ယက်အဖွဲ့" ၏စိတ်ကူးနှင့်အမြန် Development ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, နှင့် "ကွန်ယက်အဖွဲ့" တွင်တိုးတက်မှုဘွားကဒီလယ်ပြင်၌ "ကျွမ်းကျင်သူများက" ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ ဤအကျွမ်းကျင်သူများကများအတွက်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူနှင့်၎င်းတို့၏ရိုးရှင်းတဲ့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်မြင့်တက်ပြိုင်ဆိုင်မှု kilter ချွတ်, "ပြင်ဆင်ပညာရှင်များ" များအတွက်အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ယနေ့ "ပြင်ဆင်ပညာရှင်များ" ရဲ့ပင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းသမျှသောဒုက္ခမပေး, ကြီးစွာသောအရေးပါမှု၏လိုအပ်မှုအချို့ကွန်ယက်ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အတည်ပြုကြသူ "လုပ်ဆောင်ပညာရှင်များ" လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေးမှပြောင်းလဲခဲ့၏။ ဤအမှု၏မှန်ကန်မှုရှိကြောင်း "ကတိသစ္စာပြုပညာရှင်များ" ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစွန်, commonsense နှင့်လတ်တလောစျေးကွက်-related ကွန်ရက်အစီအစဉ်များကိုဖြတ်တောက်အပေါ်ကိုပြင်ဆင်သို့မဟုတ်အတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းလမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဤ "လုပ်ဆောင်ပညာရှင်များ" ၏အလှနျကောင်းချီး "Cisco" ပေါ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်နေကြသည်သူများမှာ .. !!
အဘယ်ကြောင့် Cisco အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဒီတော့ "ဂုဏ်သိက္ခာ" ပါသလဲ
CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသို့မဟုတ် CCNA သင်တန်း
Cisco "ကွန်ယက်အဖွဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ" ၏သခင်အရှင်သည်နှင့်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုအစိုးရသောမင်းများကအတည်ပြုသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုသောချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်သင်က "မင်းကြီးသည်လူတို့" သို့လှည့်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီသို့သော်အမှန်တရား Cisco, ကျွမ်းကျင်သူများဝဘ်ကွန်ယက်တစ်ခုထက်သာလွန်သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိအာမခံပစ္စည်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လမ်းကွန်ရက်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ပစ္စည်းအများစုသောအတွက်အတူတကွအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ကွဲပြားခြားနားကွန်ယက်များ, အတွက်ကြောင့်တဦးတည်းအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဇီဝစနစ်, Cisco ကနေဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့တွင် Cisco အဆိုပါကွန်ရက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အံ့သြဖွယ်, သွဇာအောကျ, ခြုံငုံရှေ့ဆောင်သည်။ ဒါဟာမသက်ဆိုင်အချိန်, နေရာနှင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်မျိုးပေါင်း, ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးချင်းစီအကြားအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အချက်အလက်များ၏လဲလှယ်ကိုမစိုက်ပေါင်းသင်းအမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဆင်တူတဲ့ gadget က client များအတွက်အဖြေကိုပေးတော်မူ၏။ Cisco ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲပေးစေခြင်းငှါပုံမှန်တည်ဆောက်ပုံအားဖွင့် end-to-end ကွန်ရက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဖော်ပြတယ်။ သူကတောင်က Cisco က Internetwork Operating System ကို Software ကိုဖွင့်အားကောင်းရန်ပစ္စည်းကိရိယာပစ္စည်းများတစ်ခုကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုပေးတော်မူ၏။ ဒါကလုပ်ငန်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များက "CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး" တတ်ကျွမ်းဆိုလိုသည်မှာ Cisco ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုသူအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကျိုးစီးပွားမေးနေကြတယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ "Cisco Certified Network Associate" လေ့ကျင့်ရေးတစ်ဦးကသင်၏ကွန်ရက်မှေးလုပျငနျးမှတွန်းပေးဖို့ဒီနေ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Cisco အဆိုပါကွန်ရက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောထိပ်တန်းစူပါပါဝါဖြစ်ထွက်လှည့်ဘယ်လိုအခါစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Len Bosack နဲ့စန္ဒီ Bosack, နှစ်ဦးစလုံးသည် Stanford University က discrete ကို PC ရုံးများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတို့ရဲ့ PC များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရဲ့ IP စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအသုံးချပြီးနှင့်အတူပြောနိုင်တဲ့ server ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လျှင်ပြန် 1980 ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတ်၏။ 1984 အတွက်သူတို့ "Cisco Systems" စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် 1992 အတွက်အမည် "Cisco Systems, Inc" ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခြိနျတှငျသူတို့မဟုတ်ရင်က "ဟောငျးဗျည်းအက္ခရာဟင်းချိုထုတ်ကုန်များ" နဲ့တူ, အကိုခေါ်ယနေ့နေသောအနည်းငယ် "Portal ကို Server များ" ကိုဖန်ဆင်း - AGS; MGS; CGS; IGS နှင့် AGS + ။ တစ်နှစ်အတွင်းပိုင်း Cisco အံ့သြစရာ 4000 switches များ, 7000, 2000 နှင့် 3000 အစီအစဉ် switches များပြောကြားခဲ့သည်။ မကွာမီ Cisco အဆိုပါကွန်ရက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးမှာပါတဲ့နှင့်လိုအပ်အထူးကုအဖှဲ့အစညျးသို့လှည့်။ ဒါကအမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ဒေသများမှာသူတို့ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်အရာအားဖြင့်နည်းလမ်းသောသူတို့အဘို့စမ်းသပ်ထားတဲ့အခြားမျိုး, ဘွားလေ၏။ , မိတ်ဆက်ပေးကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပါရမီလုပ်အားလိုအပ်ရှုပ်ထွေး gadgets နှင့်အစီအစဉ်များရှိခြင်း။ Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) အစီအစဉ် - သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ရောက်လာတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအလွန်အခြေခံခဲ့သည် - ပစ္စည်းကိရိယာများပိုမိုနံပါတ်လိုအပ်သည်သည့်အခါကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသျောလညျးထိုနညျးတူလုပျနိုငျတဲ့သူလိုအပ်သောအရည်အချင်းကျွမ်းကျင်သူများကမိတ်ဆက်ခံရဖို့။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်မလိုအပ်အဖြစ်ဤသူအပေါင်းတို့အတွက် ယူ. execute နိုင်သူကိုကျွမ်းကျင်သူများကပြင်ဆင်ကြ၏။ အဆိုပါအစီအစဉ်အထူးပြုစွမ်းရည်အမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်မှာ networking အစီအစဉ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးချင်းစီရဖို့သေချာနှင့်တစ်ချိန်ကစုံတွဲတစ်တွဲဖို့သတ်ခဲ့သည့်လူအပေါင်းတို့အားအကျိုးဆက်ဖွင့်နည်းလမ်းတွေ, အားကောင်း။ အဆိုပါ "CCNA အောင်လက်မှတ်" ကနဦးခြေလှမ်းပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်သင်ဤအစီအစဉ်အတွက် "စွန့သောကျောက်" ကဖုန်းဆက်ပါလိမ့်မည်။
CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Cisco အတည်ပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကိုမဆိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကျွမ်းကျင်များအတွက်မဖြစ်မနေလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကတခြားအောင်လက်မှတ်ဒီအခြေခံအောင်လက်မှတ်ပြီးနောက်ကြာပါသည်။ တစ်ဦး CCNA လက်မှတ်ရ / အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများစုံတွဲတစ်တွဲစာရင်းပြုစုရန်, အများဖြစ်ကြ၏ -
တစ်ဦးချင်းစီ, နားမလည်မိတ်ဆက်နှင့် Cisco က Internetwork Operating System ကိုများနှင့် Cisco သည်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် set ကိုစွမ်းရည်နှင့်အတူရာနှစ်ဆယ်ကိုနေကြသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အ internetwork ၏အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်ဒါ့အပြင်သူတို့ "non-Cisco က" နေသောပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့် float စေခြင်းငှါ၎င်းရည်မှန်းချက်နှင့်အတူညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
CCNA သင်တန်းပေးခြင်းသင်သည်သင်၏ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးတစ်ဦးပြည့်စုံရာနှင့်ဂုဏ်သရေရှိအလုပ်အကိုင်များအတွက်ပလက်ဖောင်းသို့လှည့်တဲ့စင်ပေါ်မှာငါပေးမည်။
သင့်ရဲ့ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးမူတည်အသင်းအဖွဲ့များအတွင်း, ပြင်, ကျွမ်းကျင်သူပြိုင်ဆိုင်မှုကျော်လွန်ကိုဆန့ ်. ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
သငျသညျအဖြစ် CCNA လက်မှတ်ရဖြစ်ကြ၏တစ်ချိန်ကသင်, ဒါ့အပြင် propelled အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အဘို့အတညျ့အလငျးအရည်အချင်းပြည့်မီတက်လေ - CCNP (Cisco Certified Network မှ Professional က); CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) CCDA (Cisco Certified ဒီဇိုင်းအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်) နှင့် CCDP (Cisco Certified ဒီဇိုင်း Professional က) ။
သငျသညျရှုပ်ထွေး networking သို့မဟုတ်အဆင့်ကွန်ရက်များဆောင်ရွက်လျက်ခေါ်သော၏ပြဌာန်းခွင့်တို့အတွက်မာစတာ, တတ်ကျွမ်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော် networking အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။
ထိုနည်းတူတောင်းဆိုမှုနောက်ကွယ်မှကရည်ရွယ်ချက်စေသည်အခြားအဘာပဲလက်မှတ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာမာစတာ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏, တတ်ကျွမ်း networking အဖြစ်အမြင့်အသိအမှတ်ပြု။ သငျသညျမသက်ဆိုင်သငျသညျအတှေ့အကွုံအမျိုးမျိုးသောနှစ်ပေါင်းသင့်ရဲ့ repertoire မှဆက်ပြောသည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏မျက်နှာသာရ။
သင်သို့သော်သင် CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသို့မဟုတ် CCNA သင်တန်းပေးခြင်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့ရယူဖို့သင့်တယ်အခြေခံအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိကြသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါပူးတွဲသငျသညျ have- သင့်တယ်အခြေခံတတ်လွယ်ခြင်း၏စုံတွဲတွေဟာ
အခြေခံရှိနေရင် LAN ၏နားလည်မှု, WAN နှင့် Lane ကွန်ယက်များ, သူတို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်း, setup ကိုနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
configure သို့မဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် IP, IPX ၏အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်, Relay, Ethernet နဲ့ VLAN Frame ။
ဒါကြောင့်အပေါ်ဝေးလံခေါင်သီ access ကို, အင်တာနက်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့တူအသစ်အပလီကေးရှင်းသင်ယူမှု, အပြန်အလှန်မီဒီယာ, နှင့် Dispense ။
သငျသညျပညာရှင်ပီသစွာကြီးကြပ်သူတစ်ဦးအခြေခံအုတ်မြစ်ကနေ CCNA လေ့ကျင့်ရေးရနှင့်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတိုးမြှင့်ပေါ်တွင်သင်ဖေါ်ပြခြင်းများအတွက်တမင်မဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုရရှိရန်သင့်အား enable, ထိုနေရာလေးကိုနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအခြေအနေ networking ကြီးကြပ်ခြင်း, ထို့ပြင်အလုပ်လုပ်ပုံကိုသင့်တယ် ကွန်ယက်။ သငျသညျအထူးပြုစွမ်းရည်များအတွက်အသင်းအဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်မှုဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့ပြင်ဆင်ရသင့်ပါတယ်။ သငျသညျကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခွအေနကေိုအတွင်း၌တွေ့ကြုံရသောအခါထိထိရောက်ရောက်စွမ်းရည်သိရှိစေရန်အထူးပြု, အပေးအယူနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်၏ပန်ကာသတင်းအချက်အလက်ကိုရသင့်တယ်။ သင်က Cisco သည် routing ကိုအပေါ်တစ်ဦးဝေးရောက်ရှိတာဝန်ခံရလက်မှတ်သင်တန်းများ switching သငျ့သညျ။ သင်သိပါရသင့်တယ်အခြေခံ themes များ၏အနည်းငယ် -
အလွှာ & Models နှင့်၎င်း၏ဦးစားပေး
OSI Reference Model နှင့်၎င်း၏အဆင်သင့်အခွအေန
flow control နဲ့ data ကိုယုဂျ
Cisco က switch ကိုပစ္စည်းများ
spanning-Tree Protocol ကို
တိုးတက်လာသို့ပြောင်းပါ LAN, အလွှာ-2 switch နှင့်အတူအမြိုးမြိုးနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ် Switch
IOS ကိုအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ၏ configuration
IP ကိုလမ်းကြောင်း Technologies ကများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်
Cisco က Internetwork နှင့်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေး
Novell IPX နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်း
WAN Technologies က
အတညျ့အလငျး၌ဖုံးထားရန်, ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်, အမျိုးမျိုးသော switches များနှင့်အတူအကျိုးတူ LAN သင်ယူ VLAN, ဒီဇိုင်း OSPF နှင့် EIGRP ကိုကြီးကြပ်, ကွန်ယက်စွမ်းရည်နှင့်အတူအလုပ်, မိုဃ်းတိမ်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကွန်ယက်၏လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းများများအတွက်ကွန်ယက်ကိုရှုပ်ထွေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သင့်၏။
ကျော်ကြားမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူတစ်ဦးတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့် CCNA သင်တန်းပေးခြင်းကြောင့်သင်တို့ဆီသို့ညှတျနဲ့ကောက််၏အရာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမလိုအပ်ရှိသမျှကိုပြံ့နှံ့ကွန်ရက်တိုးတက်မှုအပေါ်, မြော်လင့်ခြင်းခွဲခြင်း, ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အလူတန်းစားအထူးပြုသင်တန်းနှင့်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရုံးခွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးရှိသည်သောသူ "KOENIG Solutions ။ " - လိုအဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့ဟာ 300 သူတို့ရဲ့ဒေသများရှိကျွမ်းကျင်သူများကနေသောလမ်းညွှန်အတည်ပြုခဲ့သည်ထက်ပိုရှိသည်။ "KOENIG Solutions" လေ့ကျင့်ရေး networking အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရှေ့ဆောင်တွေအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့စုရုံးစင်္ကြံမှာဆရာပေးပို့ခြင်းရန်, ရိုးရှင်းတဲ့စာသင်ခန်းကနေပြဇာတ်ရုံအတှေ့အကွုံမှအပြီးပြောင်းရွှေ့လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်များယူပါ။ တစ်ထောငျခါစကနေကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှကွန်ရက်အတွက်တောက်ပသောအလုပ်အကိုင်, ရှာဖွေနေသူမဆိုတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုကနေ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရနိုင်သည်။
အများစုမှာဖွယ်ရှိဒီအလှနျရန်လိုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးအပိုသင့်ရဲ့စွမ်းရည်အားကောင်းတာလီချိုးသကဲ့သို့ကြောင့်မျိုးတစ်ခုခုရှိသည်ဖို့ဒါအလွန်အမင်းအခြေခံဖြစ်ပါသည်စက်မှုလုပ်ငန်း networking ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူတစ်ခုခုရှိခြင်း။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့လက်မှတ်မဟုတ်ဘဲဒါ့အပြင်အဆိုပါတတ်လွယ်ခြင်း, ညွှန်ကြားချက်, လာဘ်, ဒေတာနဲ့ Networking အခြေအနေများအပေါငျးတို့သအခြေအနေများတွင်ရှေ့ဆက်နှင့်ထိရောက်သောသငျသညျစောငျ့ရှောကျပါမညျသောအရာထိုးထွင်းသိမြင်သည်မဟုတ်။ သငျသညျတဲ့အခါ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်နိုင်ငံတကာကမသက်ဆိုင်သည့်စကားများနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အတားအဆီးများ၏အသိအမှတ်ပြုကြသည်ကိုလက်စသတ်နေသည်။ သငျသညျထိုနည်းတူဒါ့အပြင် Gain အဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်ဦးမည်မဟုတ်ပဲအမြတ်အစွန်းအသင်းအဖွဲ့များအဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူ related နေသောလူမျိုးသည်ကျေးဇူးမရှိဟုလိမ့်မယ်မှန်ကန်သောဖြစ်စေသောစပါးအတွက်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသည့်အခါပေးသောအချက်အလက်များနှင့်အကြံအစည်များ၏ရငျးမွစျသို့လှည့်။ တစ်ဦး CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကိုရရှိရန်အတွက်သို့သော်အစွန်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်သေးက infers အဆိုပါအော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသိသိသာသာချိုဖြစ်ကြပြီးသင်ကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းလျစ်လျူရှုဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။ သော CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးဖြစ်ပါသည် - ဒါဟာအောင်မြင်ခြင်းမရှိအခွင့်ထူးခံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတစျခုဆက်ဆက်လည်းမရှိ networking ၏ဘုံတှငျသို့သော်ရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။
CCNA လုံခြုံရေးလက်မှတ် - အပြီးအစီးလမ်းညွှန်